मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशन! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशन!
काठमाडौं, असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालू आर्थिक वर्षका कमजोरीबाट पाठ सिकेर विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिंहदरबारमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्ष शासकीय सुधार, कानुनी राज र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएर विकास, निर्माणको आधार तयार भएको छ ।
आर्थिक वृद्धि दर ऐतिहासिक रूपमा बढेको बताउँदै बितेको वर्षका कमीकमजोरीबाट समेत पाठ सिक्दै समयसारिणी बनाएर काम अघि बढाउन दिर्नेशन दिए । ‘आउने वर्ष कुनै तर र यदिलाई सहन सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विकास निर्माणको कामको अनुगम प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै कामलाई तीव्रता दिनूस् ।’
नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, सरकारले हाल विकसित गरेको अनुगमन प्रणालीले कामको गति बढाउन सहयोग पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा १ साउनदेखि पुरानो र सुस्त गतिलाई त्यागेर प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाइएको देख्न पाइने विश्वास व्यक्त गरे । १५ जेठमै बजेट आइसकेको अवस्थामा समेत अन्तिम समयमा आएर काम गर्न थालिएको अवस्थालाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘अवस्थामा खासै अन्तर देखिएन । यसतर्फ सबैले गम्भीर हुनुपर्दछ ।’